आफ्नो मोबाइल ह्याक भएको यसरी थाहा पाउनुहोस् ! - VOICE OF NEPAL
३१ भाद्र २०७६, मंगलवार १०:३१
432 ??? ???????
तपाईको यति महत्वपूर्ण फोन कसैले ह्याक गर्यो भने ? तपाई झट्टै यसको समाधानका लागि लागिपर्नुहुन्छ । तर यदि तपाईको फोन ह्याक पनि भयो र तपाईलाई थाहा पनि भएन भने ?